“Dawladdii Cabdi Iley Dad Iyo Duunyo Midna Iigamay Tegin” - Murugada Wiil Reerkooda Oo Dhan La Laayey - Jigjiga Online
HomeSomalida“Dawladdii Cabdi Iley Dad Iyo Duunyo Midna Iigamay Tegin” – Murugada Wiil Reerkooda Oo Dhan La Laayey
“Dawladdii Cabdi Iley Dad Iyo Duunyo Midna Iigamay Tegin” – Murugada Wiil Reerkooda Oo Dhan La Laayey
Jigjiga (JigjigaOnline) – Nuur Cumar Odowaa, waxa isaga oo arday ah laga qabtay magaalada Dhagax-buur iyadoo eedaymo been abuur iyo wanjal ah lagu soo oogay, waxaana lagu xukumay xabsi daa’in aan loo cuskanin caddayn.
Intii uu jeelka ku jiray, waxa uu la kulmay dhibaatooyin aan la qiyaasi karin oo saamayn ku yeelatay maskaxdiisa, maadaama uu indhihiisa ku arkay laba ka mid ah walaalladii oo meydkoodu maalmo hor yaallay, isla markaana uu awoodi kari waayey inuu aaso.
Qisadan xanuunka badan oo ka mid ah musalsallada Jeel Ogaadeen ee maalinba maalinta ka dambaysa ay soo baxaysa dhacdo ka murugo badan sheekooyinkii hore aad uga ogeyd hoyga Ciqaabta, ayaa waxa uu Nuur Cumar Odawaa ku bilaabayaa, qaabkii iyo waqtigii lasoo qabtay, waxaanu yidhi: “Waxa halkan (Dhagax-buur) layga qabtay markii ay taariikhdu ahayd 2009 Tirsiga reer galbeedka. Aniga oo iska ciyaal iskuul ah ayaa goor habeen ah magaalada dhexdeeda layga qabtay, waqti siddeedii fiidnimo ah ayay qolyo booliska ah xaafadda iigu yimaaddeen.
Iyadoon waxba la i weydiinin ayaa sidii la iisii waday waxa la i geeyey saldhigga booliska, markii markii aan ku jiray 24 saacadood ayaa goor maqrib ah la ii yimid. Waxa laygu yidhi qarxiye ayaad ahayd, waxaan ugu jawaabay ciyaal iskuul ayaan ahaa, halkan ku dhashay, halkeen qarxiye ku ahaa? Halkee ayaanse kusoo tababartay?
Markii aan toddoba habeen ku jiray halkii ayaa waxa la i geeyey togga, waa la jidh-dilay, si walba waa la i yidhi. Marba toori ayaa la i gelinayey oo lay lahaa wax sheeg. Imika jidhkayga haddii aad aragto waad yaabi, waan wada jajabanahay. Bil markii la i rafaadinayey ee waxaan sheegtana aan garan waayey, ilayn qaraxani wax aan garanayo muu ahayn, wax aan sheegan karayana muu ahayne, ayaa anigoo dhoobo miidhan ah gobolka la i keenay.”
Nuur waxa la hor keenay maxkamad ku taalla gobolka, taas oo ku xukuntay Xabsi daa’im, waxaana si toos ah loogu dhaadhiciyey Jeel Ogaadeen, halkaas oo ay ka bilaaabantay ciqaab aan nafis iyo naxariis midna lahayn oo hadh iyo habeenba uu ku jiray.
Isla markii Jeelka la geeyey, waxa lagu dhuftay wax aanu illaa imika iloobin xanuunkeedii, taas oo keentay inuu xattaa aqoonsado alaabtii uu sitay markii laga soo dejinayey gaadhigii garba-duubka uu ugu xidhnaa.
“Saddex cisho markii aan ku jiray anigoon ehelkayga arag ayaa layga qaaday gobolka, maxkamadda gobolka ayaa la i geeyey oo xabsi daa’im ayaa laygu xukumay. Kaddib Jeel Ogaadeen waxa lay geeyey Jeel Ogaadeen oo uu haysto Cabdi Bade. Sidaa markii aan gaadhiga uga degay anigoo afarta addinba ka xidh-xidhan, ayaa waxa la yidhi: ‘Allah! Keena, keena waa dadkii aanu doonaynaye.’ Anigu ma garanaynin waxa ay iga doonayaan. Waxaan is lahaa tolow miyaa lagu cafiyayaa? Maxaa lagu leeyahay?
Nin Cabdisalaan la yidhaahdo ayaa la ii geeyey, wixii uu igu dhuftay marna ma ilaawin, xanuunkiina xattaa alaabtii aan sitay ayaan dafiray inaan anigu leeyahay. Wuxuu igu yidhi xageed ahayd? Waxaan ugu jawaabay Dhagax-buur baan ahaa. Dabeeto xaggaa dambe (qoorta/margiga) ayuu wax aanan garaynin igaga soo dhuftay. Habeenkaa aad ayaa la ii rafaadiyey oo illaa Cabdi Bade waa layskugu kay wada yimid, habeenkii oo dhanna waa lay garaacayey anigoo waliba marka horeba dhaawac ahaa oo tooriyo igu yaalleen.” Ayuu yidhi Nuur Cumar.
Cadaabtaas adduunyo ee la mariyey maalmahaas iyo habeennadaas kaddib, waxa Nuur lagu riday gud madow oo cidhiidhi ah, waxaanu halkaas ku jiray illaa laga beddelayay taliyihii Xabsiga Cabdi Bade oo lagu beddelay Jamaal, waxaana isaga oo ka sheekaynaya uu yidhi: “Aroortii ayay yidhaahdeen Qabalaha saddexaad geeya, kaddibna god ayaa laygu riday. Anigoo godkii ku jira ayaana Cabdi Bade la beddelay, waxaana lagu soo beddelay Jamaal Dheere oo isagu dadka gacan muu saaraynin laakiin kuwa ka hooseeya ayaa dadka gam ka dhigayey, dadkuna way wada daateen (dhinteen).”
Nuur Cumar markii uu xabsiga galayey, dhamaan qoyskiisu way bad-qabeen, mana jirin qof ka xidhnaa iyo mid kale oo dhibaato hore loogu geystay, hase yeeshee maalin maalmaha ka mid ah waxa uu Jeelka dhexdiisa ku arkay meydadka laba ka mid ah walaalihii oo aanu ogeyn xilli lasoo xidhay, waxaana maalmo hor yaallay meydka oo xattaa aan hore looga aasin. Waxa intaas u dheer, ehelkiisii kale ee uu dibedda kaga yimidna dhamaantood waa la laayey, waxaana markii uu soo baxay uu waayey cid ehelkiisa oo nool.
“Laba walaalahay ah ayaa markaa ku dhimatay meesha oo iyagoo meesha yaalla aan meydkooda arkay. Walaalkaa oo dhintay markaad aragto ilayn meydkiisa waad hagaajisaa, ma waxaad aragtay walaalkaa oo meyd ah oo aanad sina odhan karaynin. Imika markaan soo xasuusto maskaxdaa i yara jiiraysa.
Reerkayagii oo dhan jeelka ayaa la iigu keenay. Markii aan soo baxay reerkayagii waxba ugumaan imannin. Halkan waxa lagu dilay saddex, kii noogu weynaana sidii laag loola dhacayey ayuu dhintay. Lix ay hooyaday dhashay ayaa la dilay, walaashay oo ambiil iisoo qaaddayna Jigjiga iyo Qabri-bayax dhexdooda ayuu gaadhi kula geddoomay oo way dhimatay.
Aniga dawladdii Cabdi Iley dad iyo maal midna iigamay tegin.” Ayuu yidhi.
Dhibaatada intan le’eg, kalidii kuma ahayn Nuur Cumar, hase yeeshee waxa jiray boqollaal kale oo waayey dhamaan xubnihii ehelkooda, isla markaana qaar badan ay awoodi waayaan in sidiisa oo kale ay aastaan meydka walaalahood oo waqtiyo badan hortooda yaallay.
Madaxweynaha Ruushka Oo Shaaciyey In $16 Bilyan Oo Deyn Ah Uu Ka Cafiyayo Afrika – Imisa Ayuu Ruushku Ku Lahaa Itoobiya?
Dibadbaxayaal bariga Itoobiya ku gubay Buug uu dhawaan qoray rai’sul wasaare Abiy Ahmed